Gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lala damacsanaa Buundada Baar Sanguuni oo la qabtay (Sawiro) | Arrimaha Bulshada
Home News Gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lala damacsanaa Buundada Baar Sanguuni oo la qabtay (Sawiro)
Saturday, January 19, 2019 News
Bulsha:- Wararka ka imaanaya deegaanka Baar Sanguuni ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Jubbaland ay gacanta ku dhinteen gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Saraakiisha maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay qabteen gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la doonay in lagu burburiyo buundada deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose.
Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in gaarigaasi loo ekeysiiyay kuwa aanay xabada karin, iyada oo la doonayay in lagu kala jaro buundada deegaanka Baar Sanguuni si ciidamada Jubbaland aysan u helin gurmad.
Arinta ayaa timid kadib markii ciidamada AL shabaab ay saaka weerar ku qaadeen saldhiga deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose.
Al shabaab ayaa weerar kubilowday Qarax ka geystay deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose.